Daacadnimo iyo daacadnimo, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waxaan u muuqdaa in si dhaqso leh wax loo qabto. Waxay umuuqataa inay tahay rabitaan bini-aadamnimo in lagu qanciyo wax, si xamaasad leh loo raacdeeyo, ka dibna loo daayo inuu mar kale xanaaqo. Tani waxay igu dhacdaa barnaamijyadayda jimicsiga. Waxaan bilaabay sannadihii dambe barnaamijyo jimicsi oo kala duwan. Waxaan orday oo ku ciyaaray tennis gudaha koleejka. In muddo ah waxaan ku biirey naadiga jirdhiska oo aan si joogto ah u jimicsado. Markii dambe waxaan ku tababbaray qolkayga fadhiga iyadoo ay igu hagayaan fiidiyaha jimicsiga Dhowr sano ayaan socod socday (Socodka). Hadda waxaan ku tababarayaa fiidiyowyo mar kale waan socdaa. Mararka qaar waan tababaraa maalin kasta, ka dib waxaan uga tago dhowr toddobaad sababo kala duwan awgood, ka dib ayaan ku soo noqdaa waana ku dhawaad ​​inaan dib u bilaabo.
Mararka qaarkood anigu sidoo kale waxaan ku ahay mid degdeg ah xagga ruuxa. Mararka qaarkood waxaan ka fikiraa oo wax ku qoraa xusuus qorkeyga maalin walba, ka dib waxaan u beddelaa koorso diyaar garow ah oo aan ilaawo xusuus qorka. Waqtiyo kale oo noloshayda ah, ayaan kaliya akhriyey Kitaabka Quduuska ah oo aan joojiyey barashada. Waxaan soo qaatay buugaag duco ah ka dibna waxaan u beddelay buugaag kale. Mararka qaarkood waxaan joojiyaa tukashada in yar oo aanan furin Baybalkayga in muddo ah.
Naftayda ayaan u garaacay sababta oo ah waxaan mooday inay tahay daciifnimo dabeecad - oo malaha taasi waa sidaas. Ilaah wuu ogyahay inaan ahay doqon iyo doqon, laakiin weli wuu i jecel yahay.
Sanado badan kahor waxa uu iga caawiyay dejinta noloshayda - xaggiisa. Wuxuu iigu yeedhay magac si aan uga mid noqdo carruurtiisa, oo aan isaga ku ogaado isaga iyo jacaylkiisa iyo in loo soo furto wiilkiisa. Xitaa markii daacadnimadaydu isbeddelato, waxaan had iyo jeer ku dhaqaaqaa isla jihada - xagga Eebbe.
AW Tozer ayaa sidan u dhigay: Waxaan ku adkayn lahaa hal waajibaadkan, falkan weyn ee dardaaranka, kaas oo abuuraya ujeedka qalbiga inuu Ciise weligiis eego. Ilaah wuu aqbalaa ujeeddadan sida doorashadeena, wuxuuna tixgaliyaa carqalado badan oo inaga saameeya adduunkan. Wuxuu ogyahay inaan u hagaajinay jihada qalbiyadeenna xagga Ciise, sidoo kale annaguna waan garan karnaa oo waxaan nafisteenna ku qancinnaa aqoonta ah in caado naftu qaabayso kadib waqti cayiman oo noqota nooc firfircoonaan xagga ruuxa ah oo aan miyir laheeyn Dadaal anaga ayaa u baahan wax intaa ka badan (Raadinta Eebbe, bogga bogga 82).
Miyaanay ahayn wax weyn in Eebbe si buuxda u fahmo qalbiga qalbiga aadanaha? Miyaanay ahayn wax weyn in la ogaado in uu inaga caawiyo in aan joogno jihada saxda ah, oo had iyo jeer diiradda lagu saaro wejigiisa? Sida Tozer leedahay, haddii qalbiyadeenu ay diiradda saaraan Ciise inuu ku filan yahay, waxaan dejin doonnaa caado nafsadda si toos ah noogu hoggaamin doonta nolosha weligeed ah ee Eebbe.
Waxaan u mahadcelin karnaa in Ilaah uusan ahayn khiyaano. Isagu waa isku mid shalay, maanta iyo berri. Isagu sidii hore ma ahan - weligiis wax uma qabanayo si dhakhso ah, oo uu ku bilaabo bilow iyo joogsi. Isagu had iyo goor waa aamin, wuuna nala jiraa xitaa wakhtiyada gaalnimada.